समाचार Archives - सरकारी जागिर
December 9, 2019 December 12, 2019 Sarakari JagirLeaveaComment on ‘मिस वर्ल्ड’को भोटिङमा अनुस्का दोस्रो स्थानमा, जीतका लागि १ लाख सेयर गरौ
‘मिस वर्ल्ड २०१९’ प्रतियोगिता सुरु हुन मात्रै दुई दिन बाँकी छ। प्रतियोगितामा यस पटक नेपालको प्रतिनिधित्व ‘मिस वर्ल्ड नेपाल २०१९’ अनुस्का श्रेष्ठले गर्दैछिन्। त्यसका लागि उनी अहिले लण्डनमा छिन्। प्रतियोगितामा विश्वभरबाट आएका १ सय २४ सुन्दरीबीच रोचक प्रतिस्पर्धा हुनेछ । अहिले ‘मिस वर्ल्ड’का लागि भोटिङ चलिरहेको छ। प्रतियोगितामा सहभागीहरु आफ्नो भोट बढाउन लागिपरेका छन्। यस्तोमा […]
May 21, 2019 July 28, 2019 Sarakari JagirLeaveaComment on त्रिभुवन विश्वबिधालयको स्नाकोत्तर प्रथम बर्षको परिक्षा तालिका सार्वजनिक
त्रिभुवन बिश्वबिधालय परिक्षा नियन्त्रक कार्यालय बल्खुद्वारा बार्षिक परिक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ सालमा संचालन हुने स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्ष (२०७५) को शिक्षाशास्त्र, व्यस्थापन, मानविकी र जनप्रशासन तर्फका आंशिक तथा प्राइभेट (पुरा तथा आंशिक) परिक्षा दिने परिक्षार्थीको निम्न कार्यक्रमानुसार परिक्षा संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबिको जानकारीको लागि यो कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको छ हेर्नुहोस परिक्षा तालिका जस्ताको त्यस्तै
May 21, 2019 July 28, 2019 Sarakari JagirLeaveaComment on लोक सेवाको बाधा अड्काऊ फुकाऊ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित, अव पालो विज्ञापनको
लोक सेवाको बाधा अड्काऊ फुकाऊ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको छ । स्थानीय तहमा आवश्यक साढे ११ हजार बढी कर्मचारी पदपूर्तिका सन्दर्भमा देखिएका कानुनी जटिलता फुकाउन परामर्शसहित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको प्रस्ताव सोमबारको बैठकबाट स्वीकृत भएको हो । प्रस्ताव परिषद्मा पेस गर्नु अघि विभिन्न तहमा विभिन्न चरणमा यसबारे छलफल हुनुका […]
त्रि.बि.ले स्नातकोत्तर तह प्रथम बर्षको परिक्षा आबेदन खुल्ला गर्यो – प्राइभेट परिक्षा दिन पाइने
March 31, 2019 July 24, 2019 Sarakari JagirLeaveaComment on त्रि.बि.ले स्नातकोत्तर तह प्रथम बर्षको परिक्षा आबेदन खुल्ला गर्यो – प्राइभेट परिक्षा दिन पाइने
त्रि.बि.ले स्नातकोत्तर तह प्रथम बर्षको परिक्षा आबेदन खुल्ला गरेको छ २०७४ सम्म स्नातक पास गरेका ले राजनीतिक शात्र र जन प्रशासनमा अन्तिम पल्ट प्राइभेट परिक्षा दिन पाउने भएका छन् फारम भर्ने मिति : २०७५-१२-१७ देखि २०७६-०१-१६ (दोब्बर दस्तुरमा २३ गते सम्म ) बिस्तृत बिवरण तलको फोटोमा हेर्नु होला
रिक्त दरबन्दीमा कहिले खुल्छ विज्ञापन ?
March 25, 2019 July 24, 2019 Sarakari JagirLeaveaComment on रिक्त दरबन्दीमा कहिले खुल्छ विज्ञापन ?
तहमा ४० हजार कर्मचारी दरबन्दी । समायोजनमा संघबाट साढे ९ हजार हाराहारीमा कर्मचारी तहमा खटिँदैछन् । स्थानीय तहकै १० हजार ३ सय कर्मचारी तहमै समायोजित भए । अब बाकि पदपूर्ति हुन बाकि २०७०० तहमा । समायोजनपछि पनि स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भएपछि रिक्त दरबन्दी लोकसेवाबाट पूर्ति गरिने भएको छ। समायोजनमा संघबाट साढे ९ हजार हाराहारीमा कर्मचारी […]